AmaProteas anqoba i-series emuva kokuthi imvula imise umdlalo ngosuku lokugcina
Kunqobe imvula ngosuku lokugcina lwe-international season yamaStandard Bank Proteas njengosuku okungadlalwanga lokugcina lomdlalo weTest yokugcina bedlala ne-New Zealand okusho ukuthi baqede ngokulingana eSeddon Park eHamilton ngoLwesithathu.
Umphumela uqiniseke ukuthi iSouth Africa inqobe i-series ngo-1-0 bebonga ukunqoba ngama-wicket angu-8 kwiTest yesibili eWellington, futhi kwaqeda ihlobo elibe iphupho – banqobe wonke ama-series – bangu-No.2 kuma-ICC rankings, beqale ku-No.7 ngo-August onyakeni odlulile.
Kodwa indlela okuphele ngayo kuphoxile kuma-Black Caps emuva kokuthi bebengaphambili kuyela osukwini lwesihlanu, kodwa bamiswa imvula.
Kwehle imvula edlulile ku-50 mm phakathi kwama-stumps ngosuku lwesine kanye nesidlo sasemini ngosuku lwesihlanu, okuqale ngemvula eningi ebusuku, kushiye inkundla imanzi.
Noma imvula imile isikhashana, ibuyenjalo uma sekukhishwa amanzi, okwenze o-umpire uBruce Oxenford noRod Tucker, bawuvale umdlalo.
AmaProteas ebemiswe kabi kuyela osukwini lokugcina ku-80/5 kwi-innings yabo yesibili futhi besemuva ngama-runs angu-95. Ithemba likukapteni uFaf du Plessis noQuinton de Kock, bobabili beku-15, kodwa besingekho isidingo sokuthi baqhubeke ne-innings yabo.
u-250 kaMorkel owokukhandleka nokuzimisela Ikhulu likaWilliamson libeka amaBlack Caps ngaphambili uDe Kock uqhube umsila wamaProteas Siningi isikhathi kumdlalo - uAmla uAmla ugqamisa usuku oluguqubele ngokuthola u-50 AmaProteas aqonde ukuqeda ihlobo elinempumelelo engaphezulu uPhilander ujabulela ukubuya kwinkundla emnika inhlanhla AmaProteas ahlula amaBlack Caps kusele izinsuku ezimbili Ithemba nenhlanhla kusiza uDuminy Ama-wicket asekugcineni ashiya womabili amazwe egculisekile AmaProteas alungiselela ukubeka yonke into encupheni kwiTest yesibili